Air Australia na Air Madagascar na-eduga na mmebi?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Australia na Air Madagascar na-eduga na mmebi?
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Madagascar • News • Akụkọ mgbasa ozi nzụkọ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Air Austral na Air Madagascar
Na Reunion Island, a na-akọ na nkwekọrịta mmekọrịta dị ugbu a n'etiti Air Austral nke Reunion Island na Ikuku Madagascar nke Madagascar na-eche nsogbu ndị na-aga n'ihu ihu ka Air Austral na-abanye na usoro ọhụụ nke mkparịta ụka iji belata nkenke 49% ha
Ugbua ekwuru na mmekorita dị n'etiti Air Austral na Air Madagascar, nke amalitere na 2017, na-aga ngwa ngwa na mbibi.
Air Austral kwụrụ ụgwọ ọgwụ mgbochi mbụ nke 15 nde euro maka oke nhatanha ya, mana a kọọrọ na Madagascar na akwụghị ụgwọ nke abụọ nke 25 nde euro dị ka atụ anya ya.
Airgbọ elu abụọ ahụ laghachiri azụ na 2017 na ha emechala ma bịanye aka na ya n'okpuru nke ndị France na-ebu aha ụgbọ mmiri nke Reunion Island ga-enweta oke pasent 49 na ụgbọ elu mba Madagascar.
Ebumnuche nke otu a bụ iji mee ka njikọ ikuku dị n'etiti agwaetiti dị iche iche na karịsịa iduga njikọ ogologo ogologo maka Madagascar na Reunion Island.
A kọwara mkparịta ụka n'oge ahụ dị ka ihe ịma aka, mana ọ kwụsịrị nke ọma. O doro anya na ndị ọrụ mmekọ ahụ kwenyere atụmatụ azụmaahịa zuru oke, na -emepụta ụzọ iji gbanwee ọnọdụ nke Air Madagascar n'ime afọ ole na ole sochirinụ. Atụmatụ ahụ gosipụtara na opekata mpe US $ 40 ka a ga-etinye ya na Air Madagascar site na Air Australia iji nyekwuo isi obodo na-arụ ọrụ.
Air Austral dị na ọdụ ụgbọ elu Roland Garros na ngalaba France nke esenidụt nke Reunion Island nke dị na Indian Ocean. Airgbọ elu ahụ na-arụ ọrụ ndokwa site na Reunion Island ruo obodo ukwu France, South Africa, Thailand, na India, yana ọtụtụ ebe aga Oké Osimiri Indian.
Air Madagascar bụ ụgbọ elu mba nke Madagascar na-arụ ọrụ na Europe, Asia, na mba ndị gbara agbata obi nke agwaetiti Africa na Indian. Isi isi ya dị na Ivato International Airport na Antananarivo. Linegbọ elu ahụ na-arụkwa nnukwu ụlọ ntanetị.